Abavelisi be-Monolithic Refractory abavelisi kunye nababoneleli - China Umzi mveliso weRenolithic Refractory
Iplastikhi enokuphoswa yenziwe nge-alumina bauxite clinker ephezulu, i-corundum, i-mullite kunye ne-silicon carbide njenge-aggregates okanye i-powders, kwaye yenziwe nge-binders ezahlukeneyo kunye nezongezo, kwaye inokuxhathisa okuphezulu. Uhlobo lwe-refractory engagqitywanga, i-refractory eyenziwe ngama-70% ukuya kuma-80% egranular kunye nezinto ezenziwe ngomgubo, i-10% ukuya kwi-25% yodongwe lweplastiki kunye nezinye izinto ezibopha, kunye nenani elifanelekileyo leplastifier.
Isamente ephantsi enokuphoswa ibhekisa kwinto enokuphoswa ngexabiso eliphantsi lesamente. Idosi yesamente yezinto ezinokubangela ukuba isamente iphindaphindwe nge-20%, kwaye idosi yesamente yeesamente ezisezantsi zimalunga neepesenti ezi-5, kwaye ezinye ziye zanciphisa ukuya kwi-1% ukuya kwi-2%. Injongo yokunciphisa isixa sesamente kukuphucula ukuxhathisa komlilo.
Amandla aphakamileyo okuphinda kuhanjiswe ziindidi zesamente ezisekwe kudaka olunye olomileyo, olulungiswe yimveliso yezemveliso yesamente yamandla, ukuhlanganiswa kwezimbiwa, amandla aphezulu kunye ne-anti-crack arhente enganyangekiyo.
Amandla aphakamileyo anokuphinda asetyenziswe ngokudibanisa amanzi kunye nokuvuselela indawo. Inokwakha okuhle kunye nokukwazi ukusebenza. Ubungqingqwa obuthile bomaleko wokulwa nokunxiba benziwa kumphezulu wesisele okanye umkhombe we-ore ngokutyabeka ngesandla. Emva kwesondlo esiqhelekileyo, inokuhlangabezana neemfuno zobugcisa kwaye inokumelana ne-abrasion. Ukuphakama okuphezulu, okuphezulu kunye nekhonkrithi esisiseko (isisele sentsimbi), ukumelana nefuthe elinamandla, amandla aphezulu okucinezeleka, ukuhlala ixesha elide, ubomi obude benkonzo, njl.
Izinto ezilahliweyo ezilahlwayo ziluhlobo lwegranular kunye nezinto ezenziwe ngomgubo ezenziwe ngezinto ezinqabileyo, kwaye isixa esithile se-binder kunye nokufuma kuyongezwa kunye. Izinto ezilahliweyo ezinokubumbeka zinamanzi aphakamileyo kwaye zilungele ulwakhiwo ngokwenza indlela. Sisikhanyisi esingafakwanga esimilo esinokuba lukhuni ngaphandle kokufudumeza. Ukuphinda kubuye kufane nezitena ezitsalayo zohlobo olufanayo, indawo yokuthambisa umthwalo iphantsi kancinci kunaleyo yezitena ezikhanyelayo, kwaye intsebenzo iyonke ingcono kunezitena ezikhanyelayo. Ukuphosa kunamandla aphezulu okucinezela kubushushu begumbi ngenxa yesiphumo sobushushu obuphantsi kwi-binder. Ngenxa yokuthembeka kolwakhiwo, ukuqina komoya kwesithando somlilo kulungile, akukho lula ukukhubazeka, kwaye ukuxhathisa kwayo ukungcangcazela komatshini kunye nefuthe kungcono kunaleyo yokwenziwa kwezitena.